Mifandraisa amin’ireo namana mahafinaritra ato amin’ny Global Voices dia ampifandraisinay amin’ny namana ato amin’ny vondrom-piarahamonina ianao · Global Voices teny Malagasy
Mifandraisa amin'ireo namana mahafinaritra ato amin'ny Global Voices dia ampifandraisinay amin'ny namana ato amin'ny vondrom-piarahamonina ianao
Mpanoratra L. Finch, Sahar Habib Ghazi, Aparna Ray Nandika Liva Andriamanantena
Voadika ny 10 Jolay 2019 7:05 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Aprily 2016)
Sary avy amin'ny mpisera Flickr jen collins. CC BY-NC-ND 2.0
Nitombo tamin'ny fomba mahatalanjona sy goavana ara-batana tokoa isika tao anatin'izay taona vitsy lasa izay! Efa maherin'ny 1 400 ny isan'ny mpandray anjara ao anatin'ny vondrom-piarahamonintsika amin'izao fotoana izao.
Ho an'ny mpikambana vaovao dia mety ho sarotra ny mitety ny Global Voices ka hahita ny zavatra manokana – ny fifandraisana izay mandrava ny rindrina virtoaly sy mampifamatotra antsika amin'ny tena fiainana. Ireo fifandraisana manokana ireo indraindray dia nanomboka amin'ny fifanakalozan-tendry (ping), fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra, na fanontaniana momba ny fandikan-teny ary nitarika amin'ny resadresaka lava ao amin'ny Skype, ary indraindray miaraka manavatsava tanàndehibe vaovao mihitsy aza! Nitranga ho azy izany ho an'ny ankamaroantsika raha mbola fikambanana kely kokoa isika teo aloha. Afaka mitondra izany hatsarana miafin'ny Global Voices izany ve isika ho an'ireo mpandray anjara vaovao?
Natao ity andrana ity mba hijerena raha toa ka afaka manangana fifandraisana akaiky kokoa ho an'ireo mpikambana GV taloha sy GV vaovao isika.